Inter Milan oo ka indho la’a guusha & wararkii kale ee Horyaalka Serie A-ga Talyaaniga – SBC
Inter Milan oo ka indho la’a guusha & wararkii kale ee Horyaalka Serie A-ga Talyaaniga
Posted by editor on October 17, 2011 Comments
Horyaalka Talyaaniga ee Serie A-ga ayaa todobaadkan ahaa mid la yaab leh ka dib markii 12 kooxood oo kulmay lix kulan oo kala duwan ay wada galeen barbardhac 0-0 oo aan wax goolal ah lakala dhalin.
Kulamadii Sabtidii dhacay oo ku kulmeen 14 kooxood oo kala duwan ayaa waxaa lakala dhaliyey 5 gool oo kaliya halka kulamadii Axadii dhacay la kala dhaliyey 8 gool oo kaliya taasi oo ka dhigan in 13 gool oo qura todobaadkan lagu kala dhaliyey kulamadii horyaalka Taliyaaniga.
Kooxda Inter Milan ayaa la kulantey todobaadkan guuldaradii afaraad horyaalka Talyaaniga ee Serie A-ga ka dib markii gurigeeda San Siro ay ku garaacdey kooxda Catania ee dhisan jasiirada Sicily oo ah Jasiirada ugu weyn ee Mediterranean Sea isla markaana sanadka soo socda u dabaaldegaysa 104 sano jirkeedii markii la aasaasay kooxda.
Inkastoo kooxda martida loo ahaa ee Inter Milan ay la hormartey gool uu dhaliyey daqiiqadii 6-aad ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Argentine Esteban Matías Cambiasso Deleau lagu naaneyso Cuchu ama duqa/Odayga.
Qaybtii hore ee ciyaarta iyadoo lagu kala nastey 1-0 oo ay Inter hogaanka ku hayso ayaa markii ay isku laabten kooxda martida ah ee Catania waxaa gool caaqibo leh 3 daqiiqo markii ay ciyaartu socotey qaybtii labaad u dhaliyey ciyaaryahanka reer Argentine Sergio Bernardo Almirón oo bisha soo socota ee November noqon doona 31 sano jir.
Laakiin daqiiqadii daqiiqadii 51-aad kooxda Inter waxaa ku soo da’day daruurtii guuldarada ka dib markii gool rigoore ama gool ku laad ah oo uu u dhaliyey kooxda Catania ciyaaryahanka reer Talyaani Francesco Lodi taasi oo natiijadii ka dhigtey 1-2 oo ay guushu ku raacdey kooxdii martida aheyd ee Catania.
Naadiga AC Milan ee ay isku magaalada ka dhisan yihiin Inter Milan oo tabar daro ku bilodey horyaalka sanadkan ayaa kulankii sabtidii ay ku ciyaareen gurigooda Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) kooxda Palermo waxay ku garaacdey 3-0.
Ciyaarta oo socotey 5 daqiiqo oo kaliya ciyaaryahan Antonio Nocerino ayaa goolka furitaanka u saxiixay AC Milan isagoo kooxdiisii hore ee Palermo kaga naxsadey goolkaasi, waxaana labeeyey Robinho & Antonio Cassano.
Goolasha AC Milan
Nocerino (Daqiiqadii 40-aad)
Robinho (Daqiiqadii 55-aad)
Cassano (Daqiiqadii 64-aad)
Napoli oo geftey guul ay ku noqon laheyd hogaamiyaha horyaalka Talyaaniga
Kooxda Napoli oo ku socotey jawi wanaagsan ayaa ku guuldareysatey hami ay ku doonaysay inay ku qabato hogaanka Serie A-ga ka dib markii gurigeeda Stadio San Paolo looga badiyey 2-1 oo ay ku dubatey kooxda Parma.
Ciyaaryahanada Farancesco Modesto & Massimo Gobbi ayaa god ku ridey goolkii barbardhaca ee Giuseppe Mascara u u saxiixay Napli & rajadii Napoli oo guuldarada todobaadkan ay tahay tii labaad tan iyo bilowgii horyaalka Talyaaniga.
Mascara (Daqiiqadii 76-aad)
Gobbi (Daqiiqadii 57-aad)
Modesto (Daqiiqadii 82-aad)
Juevntus oo barbardhac lagu qabtey
Juventus oo barbardhac 0-0 lagu qabtey balse hogaanka ama kala horeynta kooxaha ayay ugu sareysaa iyadoo ay isku meel wada joogaan kooxda Udinese oo ay wada leeyihiin min 12 dhibcood & 6 gool.
Kulankan oo shaley ka dhacay guriga kooxda ay iska leedahay shirkada Paluani ee Doolshaha & macmacaanada kale farsameysa Chievo ee Stadio Marc’Antonio Bentegodi ee magaalada Verona.
Weeraro iyo weerar celis labada kooxood ay isku qaadeen ayaa ku soo dhamaadey 0-0 waxaana natiijadaasi ay hal dhibci siisey labada kooxood.
Kulamada kale ee Horyaalka Talyaaniga
Genoa 0-0- Lecce
Atlanta 0-0 Udinese
Casenea 0-0 Fiorentina.
1 Juventus 6 6 12
2 Udinese 6 6 12
3 Cagliari 6 3 11
4 Lazio 6 2 11
5 Napoli 6 5 10
6 Palermo 6 0 10
7 Chievo 6 1 9
8 Catania 6 -1 9
9 Parma 6 -3 9
10 Fiorentina 6 2 8
11 Genoa 6 1 8
12 Roma 6 1 8
13 AC Milan 6 0 8
14 Siena 6 0 6
15 Atalanta 6 1 5
16 Novara 6 -2 5
17 Inter Milan 6 -5 4
18 Bologna 6 -6 4
19 Lecce 6 -6 4
20 Cesena 6 -5 2
iga raali ahaada
Ac Milan waxa ay dhalisay goolka hore cayaarta oo socota 40 daqiiqo ee ma ahan ayada oo socota 5 daqiiqo, malaha waxa aad ka waday qayba hore ee cayaarta oo ay ka dhiman tahay 5 daqiiqo, marlka saacada iyo qoraalka isu fiiri
walaal waxaa kale oo aan xusi rabay dhamaan goolasha la dhaliyay sabtidii iyo axadii waa 14 ee maahan 13.
mar kale waa mahadsan tahay